घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल किंवदंतीलाई उपस्थित सबै भन्दा राम्रो नामको नामले प्रस्तुत गर्दछ। 'गिलासको म्यान'। हाम्रो Arjen Robben बचपन स्टोरी र अनर्थ जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपन समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पूर्ण खाता ल्याउछ। विश्लेषणमा फेम, पारिवारिक जीवन र धेरै अफ र पिचका बारेमा उनको जीवनका बारेमा केही तथ्यहरू उल्लेख गर्नु अघि उनको जीवन कथा समावेश गर्दछ। मैले सुरु गर्नु अघि, पहिलो ... मलाई सोध्नुहोस्; के यो पनि अजजन रोबेनको उल्लेख बिना महान विङ्गरहरूको सूची संकलन गर्न सम्भव छ? मलाई लाग्छन। अब सुरु हुन्छ।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक बचपन जीवन
अर्जेन रोबेनको जन्म २ 23 जनवरी १ 1984। XNUMX मा उनका बुबा, हंस रोबेन, एक फुटबल एजेन्ट र उनकी आमा श्रीमती मार्जो रोबेन, एक स्थानीय सेलिब्रिटीमा भएको थियो। उहाँ आफ्ना बाबुआमाले नेदरल्याण्डको ग्रोनिंगेनमा रहेको ठूलो उपग्रह शहरमा हुर्काउनु भएको थियो।
आफ्नो बाल्यकालको अवधिमा आर्जेनले कहिल्यै शिक्षामा रुचि देखाएन जबसम्म उहाँ आफ्ना बाबुआमाले धेरै विश्वस्त पार्नुभयो। यसको सट्टा, उसले आफ्नो बुवालाई पछ्याउन मन परायो जबकि ऊ आफ्नो फुटबल व्यवसाय गर्दछ। ऊ फुटबलमा रुचि एक सानै उमेरमा आयो। उसको उमेर २ बर्षको उमेरमा युवा एकेडेमीमा सम्मिलित हुन उसको अनुरोधले उसको आमाबुबालाई तिनीहरूको छोराको गन्तव्य बुझ्यो र बुझ्यो। एक ठूलो भाग्यले उसलाई महान फुटबलर बन्न दर्शाउँछ।
उनीहरू आफ्नो गाउँको सर्वश्रेष्ठ बच्चा फुटबल स्कूलमा उहाँलाई दर्ता गर्न हिचकिचाएनन्।
आर्जेन रोबेन युवा फुटबल आईडी।
जबकि उनका उमेरका अन्य बच्चाहरू बिहान औपचारिक शिक्षाको लागि घर छोड्छन्, अर्जेन रोबेन आफ्नो फुटबल स्कूलमा जान्छन्। उनले एक बच्चाको रूपमा आर्जेन रोबेन्युनिर फुटबल गतिविधिहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिए। सानो बालकको रूपमा समेत अरजेनले आश्चर्यकर्महरू गरे। ऊ सिकेर सबैभन्दा कान्छो बच्चा भयो कोर्वर विधि, पहिले डच कोच वाइसेल कोर्वर द्वारा आविष्कार गरिएको फुटबल प्रविधी।
कोर्वर विधिले पेले र माराडोना जस्ता किशोरीहरूको भिडियोहरूबाट फुटबल परिष्करण कौशलको एकत्र समावेश गर्दछ। यी कलाहरू फुटबल अकादमीहरूमा युवा ताराहरूलाई व्यापक अकादमिक तरिकाले पारित गरिन्छन्। यस प्रविधि अन्तर्गत, बच्चाहरू आधारभूत, पारित, गति र घातक परिष्करणबाट संरचित तरिकामा प्रगति गर्न हो। अर्जुन रोबेन को सबै भन्दा राम्रो बाल फुटबल खेलाडी को रूप मा मानिन्छ जसमा कोरवर एक्शन को महारत हासिल भयो।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
उसकी आमा: श्रीमती मार्जो रोबेन, एक स्थानीय सेलिब्रिटी आफ्नो सार्वजनिक बोली प्रतिभाको लागि प्रसिद्ध छ र उनको लगातार सहभागिता युरोसोनिक ग्रोनिंगेन महोत्सवमा जो नेदरल्याण्डमा आयोजना गर्दछ।
आर्जेन रोबेनको आमा।
युवा जनको लागि शिक्षामा विश्वास गर्ने सार्वजनिक वक्ताको रूपमा समेत, उनी विश्वास गर्छन् कि हरेक बच्चा आफू योग्य हुन योग्यको छ। अहिलेसम्म उनलाई अर्जनले फुटबलको निर्णयमा समर्थन गरेकोमा र उनको सानै उमेरमा शिक्षा नभई उनीलाई माया गरी।
उहाँको बुबा: श्री हंस रोबेन फुटबल व्यवसाय मा एक प्रसिद्ध हो। यो अक्सर गम्भीर देखिने र व्यापार दिमागको मानिस फुटबल मा आफ्नो छोराको टेक अफको लागि एक राम्रो आधार प्रदान गर्न को लागी स्वागत गरिएको छ।
Arjen रोबेन बुबा।
ऊ सँधै आर्जेनको एजेन्ट र प्रबन्धक भएको छ। श्री हान्सले अर्जेनका सबै ठेका हस्ताक्षरहरू र सम्झौताको लागि सुविधा र सुविधा लिन्छन्। दुबै पक्षहरू प्राय: सँगै चित्रण गरिन्छ जसमा उनीहरूले के गर्छन् राम्रो गर्छन्।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
आर्जेन रोबेन र श्रीमती।
अर्जुन रोबेन वर्ष 2000 मा हाई स्कूल मा आफ्नो बर्नडीन ईिलर्ट देखि मिले।6वर्षको सजावट पछि, दुई दलहरूले9जुन 2007 जुन ग्रोनिंगिङमा उत्तरी शहर Stadsschouwburg मा गुटहरू बाँधिसकेका छन्।
उनको परिवार वर्तमान मा तीन बच्चाहरु जसको नामहरु लुका, काई र लिन थिए। उहाँ एक पूर्ण परिवार हुनुहुन्छ। उनको मनपर्ने परिवार उद्धरण गर्दै छन्; "सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई स्वस्थ र खुशी देख्नु हो। फुटबल मेरो जीवन हो तर मेरो परिवारको स्वास्थ्य र खुशी संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
आर्जेन रोबेन परिवार चित्रण गर्न मन पराउँछन्। यी क्षणहरूले समय स्थिर गर्दछ। यसले एकै क्षणमा उसको सम्पूर्ण परिवार लिन्छ।
आर्जेन रोबेन परिवार चित्र।
आफ्ना सबै बच्चाहरूमा उनी विशेष गरी आफ्नो जेठो छोरो लुकाको नजिक छन्। यहाँ छ अर्जेन रोबेन र छोरा, लुका
जब उनले आफ्नो अन्तिम छोरो देख्थे तब चीजहरूले यति भावनात्मक हुन्छ 'लिन' उसको बुबाले उसको स्थानमा धेरै दायरामा आफ्ना लक्ष्यहरू मनाइरहेको देखेर रोएको थियो। हुनसक्छ ऊ आफ्नो बुवाको पाखुरामा हुन चाहन्छ। Bernadien Eillert र उनको पति दुबै यस अवसर मा आफ्नो छोरालाई सान्त्वना छ।
Bernadien Eillert आफ्नो पति को लागि विशेष रूप देखि परवाह गर्दछ जब विशेष रूप देखि जब उनि एक चैंपियन्स लीग हानि या अन्य मुद्दों को तल मा छ। उहाँलाई जोगाउन एक सजिलो बाटो उहाँलाई ठूलो दलको लागी छ।
UEFA च्याम्पियन्स लिग पराजयको सामना गर्दै: जब तपाईंसँग एउटी पत्नी छ।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सुन्दर घरको लागि माया
अरजेन रोबेनको सुन्दर घर भिजुअल अपिलिंग हुन्छ विशेष गरी जब यसको मैला पक्षबाट हेराई गरिन्छ। ऊ गिलासको मानिस मात्र हैन, तर कक्षामा पनि एक हो।
आर्जेन रोबेनको सुन्दर घर।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -आफ्नै लागि एक संग्रहालय
धेरै फुटबलकर्ताहरूले आफ्नो पदक-भाडाको क्यारियरबाट बञ्चको अंश मात्र राख्न व्यवस्थापन गर्छन्। अर्जुन रोबिन एकपटक एक उपन्यास विचारको साथ आउन सकेन केहि महत्त्वपूर्ण कुरा सुनिश्चित गर्न सकेन।
किन उसलाई एउटा संग्रहालय चाहिन्छ।
उनले एक पटक आफ्नो उत्कृष्ट क्यारियरलाई फोन गरिसकेपछि एकजना संग्रहालय निर्माण गर्न आफ्नो योजनामा ​​आफ्नो घरमा आफ्नो घरको घर बनाउन घोषणा गरे। तिनका शब्दहरूमा
'जब म र मेरी श्रीमती म घरमा बस्छौं, म मेरो सबै चीजहरू जम्मा गर्ने र निजी संग्रहालय निर्माण गर्ने सपना देख्छु। यो मेरो, मेरो परिवार र मेरा नजिकका साथीहरूको लागि हुनेछ। '
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उपनाम पछिको कारण 'गिलासको म्यान'
उनको उत्कृष्ट खेल पंख तल, क्रिएटिव गुजर क्षमताहरु र लक्ष्य को सामने महान दृश्य को लागि जानिन्छ। विंगरले उनीहरूलाई सजिलै तोड्न सक्ने क्षमताको कारण 'द द द ग्लास' उपनाम कमायो।
आर्जेन रोबेन - उनको उपनाम 'ग्लासको म्यान' पछाडि कारण
यो एक चाल हो कि गरेको छ डचम्यान संसारमा सबैभन्दा डरलाग्दो विङ्गर मध्ये एक, र केहि चीजहरू जुन उसले जारी राख्दछ उसले सटीकता बिना।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यान्सर डराएर
अर्जेन रोबेनले एकपटक आफ्नो देब्रे अण्डकोषमा लम्प भेट्टाए। यसले पीडाको रूपमा श्रृंखलालाई अप्रिय भावनाहरूको कारण गरायो जसले उसको जीवनमा खतराको खतरा प्रतिनिधित्व गर्‍यो। उसलाई यो टेष्टिकुलर क्यान्सर हुन लागेको छ उसको लागि, यो एक शल्यक्रिया के थियो पत्ता लगाउने एक मात्र विकल्प थियो। भाग्यवस उनको लागि, उहाँ एक गहन शल्यक्रिया पछि तुरुन्तै यस डराउनुबाट सफा हुनुभयो।
एक रिपोर्ट मा, रोबन ले भन्यो;
“म धेरै डराएको थिएँ। यो मेरो लागि गाह्रो समय थियो। मलाई लाग्यो कि मेरो फुटबल अब महत्त्वपूर्ण हुनेछैन। केही दिन पर्खनु भयानक थियो। मलाई थाहा भएन कि मलाई के हुन्छ। शल्यक्रिया पछि, मैले सुनेको खबर राम्रो थियो र यो ठूलो राहत हो। ”
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -जीवन भन्दा पहिले जीवन
यो ग्रोनिङ्गनमा भएको थियो जहाँ उनीहरूले अहिलेको ट्रेडमार्क कौशललाई प्वाइन्टमा काटेर र नेटको पछाडि फेला पारेको कदर गरे। विंगरले तुरुन्तै पहिलो टोली चित्रमा धक्का दिए र ग्रोनिङनको खेलाडीको सिजन एक्सएनमक्समा थियो। रोबेनको प्रतिभाले चाँडै ठूलो क्लबहरूको ध्यान प्राप्त गर्यो
उनको गति गुजरने क्षमताहरु र बल गति मा उत्कृष्ट कारणले, उनीहरु लाई स्थानीय क्लब एफसी ग्रोन्निंगन द्वारा तुरुन्तै हस्ताक्षर गरे, जहाँ उनले दर्जनहरु द्वारा गोल को स्कोर को लागि आफ्नो कटौती को विशिष्ट कौशल विकसित गरे। उनले 2000 मा ग्रोनिङ्गनको लागि आफ्नो पहिलो खेल खेलेका थिए, वालवाजीको विरुद्ध एक विकल्पको रूपमा आउँदै।
त्यसो भए पछि रोबन कहिल्यै फिर्ता नदेखेको, र उनको उत्कृष्ट कुकुरको कारणले संसारको केहि भन्दा ठूलो क्लबहरू चलेको छ, पीएसवी इन्दनभन (नेदरल्याण्ड्स), चेल्सी (इङ्गल्याण्ड), रियल म्याड्रिड (स्पेन) र जर्मन दिग्गजका साथ मनपर्छ। बायर्न म्यूनिख।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -कार
अडीले अर्जुन रोबिनलाई आफ्नो नयाँ कारहरू प्रदान गरेका छन्। उनी अडीलाई माया गर्छन् A5 - कार जुन उसले $ 58,500 मा किनेको थियो।
आर्जेन रोबेनको अडी।
ऊ आफ्नो करारको हिस्साको रूपमा आफ्नो कार प्रदान गर्न क्लबहरू संलग्न गर्न मन पराउँदछ। उहाँसँग हरेक वर्ष लाखौं कमाई गर्दै, नयाँ कार लिनु केही नयाँ कुरा होइन। उसको अडी निजीकृत नम्बर प्लेटको साथ आयो, यसलाई आफ्नै रूपमा चिन्न योग्य बनाउने।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पिउने बीयर
उहाँले एकपटक एक विशाल गिलासबाट पेय बियरसँग ट्राफिक जित्नुभयो।
Arjen रोबेन बियर मन पराउछ - व्याख्या।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -तराईको समस्या
आर्जेन रोबेनका लागि पौंडी भनेको ठीकै सजिलो गतिविधि होइन। पानीको तत्वसँग लड्न सबैभन्दा कुशल र प्राविधिक मार्ग खोज्न उसलाई प्रायः गाह्रो लाग्छ। तलको फोटोले डर्क कुइट (माछा परिवारका मानिस) ले उसलाई समुद्रमा डुब्नबाट मद्दत गरेको देखाउँदछ।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -लक्ष्य उत्सव दुर्घटना
जब बुर्जस्लिगा नेताहरूको लागि २-०को जितमा अर्जेन रोबेनले ब्राउनस्विग विरूद्ध बायरन म्यूनिखका लागि गोल गरे, उनले सोचे कि उनी फूर्ति लगाएर मनाउँछन्। खुशीको कारण, ऊ शैलीमा आफ्नो घर प्रशंसक तिर चार्ज भयो। दुर्भाग्यवश, उसको घुँडा स्लाइड उत्सव खराब बाट भयानक मा जान्छ, जब उहाँ टर्फबाट आफ्नो पीठमा बाउन्स गर्नुहुन्छ, प्रक्रियामा आफ्नो लेगि ri्ग्स चीरउँदै।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, न केवल यो अत्यन्तै गलत हो र सम्भावना अत्यन्तै पीडा लगाउनुहोस्, तर सबै यसलाई टोपी गर्न, उनको मोजेहरू बर्बाद भयो। फैलियो!
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -Caricature
एक समयमा जब फुटबल खेलाडीहरूको भिडियो क्यारिकेचर धेरै बेर गएको थियो, अर्जेन रोबेन बाहिर थिएनन्। ऊ हो जसलाई उसको लेबल लगाए पछि यो भयो 'डाइभि che धोखा'।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -Bald Hair Issues
कपाल झर्नु अर्जेन रोबेनको लागि संवेदनशील विषय हो। अरजेन रोबेनको कपाल झर्नु उसको र कपालको लागि एकदम छिटो अघि बढेको छ। त्यो भन्दा धेरै पहिले रोबेनको कपाल थियो तर अब उनी टाउकोको टुप्पोमा पूरै टक्कै छ। म तल अर्जेन रोबेनको कपालका तस्विर पोष्ट गर्दैछु, साथ साथै रोबेनको कपाल झर्ने फोटो पनि राख्दै छु।
तपाई छिटो प्रगति देख्नुहुनेछ जुन years बर्ष भन्दा कममा भएको छ। रोबेन २००6देखि २०० 2006 मा बाल्टिन सुरु गरे र २०१ 2007 सम्म उनको टाउकोको कपालमा केश छैन।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -विवादहरू
आर्जेन रोबेन एक उत्कृष्ट फुटबलर हुन सक्छ, तर समय भन्दा पहिले टक्कडले डचम्यानलाई सबैलाई रिस उठाउने बानी छ। र उनी कुनै पनि व्यक्तित्व प्रतिस्पर्धा जित्न चिन्तित हुन नसक्ने भए पनि, आइतबार रात उनले आफूलाई चोटपटकको समयमा विवादास्पद दण्ड कमाएर कुनै पक्षपात गरेनन जसले अन्ततः हल्याण्डलाई मेक्सिकोको साथ अन्तिम १ clash सम्म आफ्नो भिडन्तमा जित्यो। सबै समयको फुटबलमा सबैभन्दा खराब डाइभर को हो?
डचम्यानले आफ्नो छेउमा विश्वकप अन्तिम १ 16 भिडन्त जित्नको लागि एक नर्म पेनल्टी जित्यो तर उनी सबै समयको नक्कली टम्बलरहरूको सूचीमा कहाँ छन्?
र उनको पुरानो मा पनि उहाँ अझै पनि रेफरी बेवकूफ छ।
अर्जन Robben बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -लोकप्रियताको तथ्याङ्क